မင်္ဂလာဈေးအနီး မှ (၂)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မင်္ဂလာဈေးအနီး မှ (၂)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု
မင်္ဂလာဈေးအနီး မှ (၂)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 18, 2010 in Myanma News, News |9comments
ရန်ကုန်မြို့ရေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြိုနယ်၊၁၂၁လမ်း၊ရှိရယကဥက္ကဌဦးစံသိန်းဧ။်နေအိမ်ရှေ့တွင်၁၄.၁၀.၂၀၁၀နေ့ည ၈း၃၀ နာရီခန့်ကနှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ၁၂၁လမ်းတွင်နေထိုင်သူမောင်ဘိုဘိုမှ၁၂၅လမ်းသပြေကုန်းရပ်ကွက်မှ လူငယ်နှစ်ဦးအားဓားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါအခြေနေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေသော်လည်း အထူးသဖြင့်ရယကဥက္ကဌအိမ်ရှေ့တွင်ဖြစ်ပွားမှု့အား အချိန်မှီသိရှိတားဆီးနှိင်ခြင်းမရှိသည့်အပေါ်၎င်းရယကဥက္ကဌနှင့်ရယကအဖွဲ့အားစိတ်ပျက်လျှက်ရှိကြသည်။ အဆိုပါအချင်းဖြစ်ပွားသောနေရာနှင့်ရယကရုံးမှာကိုက်၅၀ခန်သာကွာဝေးသည်။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ပွားမှီကပင်အဆိုပါရယကဥက္ကဌဦစံသိန်းဧ။်အစ်စလမ်ဘာသာဝင်ဇနီးမှ အစ်စလမ်ဘာသာဝင်များအကြားပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုမဲထည့်ရန်လိုက်လံပြောဆိုမှုများအပေါ် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှ မကျေနပ်မှုများရှိနေခဲ့ကြသည်။
ပြည်တွင်းက ပို့တဲ့ သတင်းက ပြည်တွင်းကတောင် မသိဘူး. အခုမှ သိတယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျ။လသာမှာတောင် အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူး။သူခိုးတွေ၊လူသတ်မှုတွေ၊ခါးပိုက်နိုက်တွေ အရင်ကထက်နှစ်ဆ ပိုများလာတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကို အားစိုက်နေကျတဲ့ နိုင်ငံအကြီးအကဲ အာဏာပိုင် ပြည့်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ တာဝန်ပေါ့လာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။သူတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေကို လူစေ့တတ်ပြီးတော့ မဲပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြည့်သူ့ထမင်းကိုစားနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြည်သူတွေကိုတော့လုံခြုံမှုရှိအောင် တချက်တော့ ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်။မြို့ထဲတွေမှာ ကြည့်မကောင်း ရှု့မလှအောင် သရုပ်ပျက်နေတယ်။
ပြည်သူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူတို့စီမံချက် အောင်မြင်ရေးက အဓိက အားစိုက်နေကြတာပေါ့..။
အဓိက အင်အားကို အဓိက နေရာမှာ အသုံးချနေတာလေ… ဟိုတစ်ရက်က ကြုံသေးတယ်၊ ရယက ရုံးမှာ လူတွေစုပြီး ဘာလုပ်နေသလဲ မှတ်တယ် ဘောပွဲကြည့်နေတာ၊ လမ်းထိပ်မှာ လူငယ်တွေ ရန်ဖြစ်လို့ ခေါင်းကွဲသွားတာတောင် မှ မသိကြဘူး.
ဒီသတင်း တွေ အားလုံး အမှန်ဖြစ် မဖြစ်ဆိုတာတော့ အနီးဝင်းကျင် ကလူတွေက ပို သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် တကယ်သာ အမှန်ဆိုရင် တော့ တစုံတဦးကြောင့် ဆက်နွယ်နေပုံရပါတယ် ဆိုလို တာ က ၂၀၁၀ အရေးအတွက် ဗြူဟာ တရပ်ဖြစ်နေပါတယ် ဘာ ဘဲဖြစ်ဖြစ် သိရဲ့သားနဲ့ ဥပဒေအရ ရဲက မလုပ် နိုင်ဘူးဆိုတာ ထူးခြားနေပါတယ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့ ကျွန်တော် တို့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နအဖ ကိုရော သူနဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ အရာတွေ အားလုံး ကို မထောက်ခံရေးဘဲလိုပါတယ် ကဲ မန္တလေးဂေဇက် ပရိတ်သတ်ကတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက် မလဲဆိုတာ အဓိကပါဝင်နေတယ်(ပြည်တွင်းကမဲကိုဆိုလိုတာပါ)…….။
တော်သေးတာပေါ့နော် ။ရယက ရုံးနဲ နီးနေလို့။ ဝေးနေရင် ဘယ်နှစ်လောင်းပြိုင်မလဲမသိဘူး ။
ဥက္ကဌရုံးနဲ့ ကိုက် 50 ကွာတာတောင်အချက်ပေါင်းများစွာအထိုးခံရတယ်။ရုံးနဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာမှာဆို
သိရတာကတော့ လူသတ်မူဖြစ်တာက လူငယ်အချင်းချင်း ရည်းစားလုရင်းဖြစ်ကြတာတဲ့ ။ သတ်တဲ့ကောင်လေးက (13) နှစ်ပဲရှိသေးတယ် ။
အသတ်ခံရတဲ့ကောင်လေးကလဲ အခုမှ (17) နှစ်တဲ့ ။
လူကြားသူကြားထဲမှာ သတ်တာလား …